Natiijada tijaabo kale oo laga qaaday kalkaalisadii caafimaad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ku wargelin muhiim ah: Dabab ka aloosan goobo badan ee dalka.
Natiijada tijaabo kale oo laga qaaday kalkaalisadii caafimaad
La daabacay fredag 9 januari 2015 kl 12.00
Waxa maanta soo bixi doonta natiijada tijaabooyinka dheeraad ah oo laga qaaday kalkaalisadii caafimaad ee laga shakisnaa in uu ku dhacay cudurka ebola Haweenaydan oo looga shakisan yahay in ay cudurkani ka soo qaadday waddanka Siiralyoon (Sierra Leone ),
ayaa tijaabadii shalay soo baxday muujisay in aanay cudurkani qabin. Waxaana hadda lagu daryeelayaa qaybta karatimaynta ee dhakhtarta jaamacadda Linköping. Iyada oo tijaabooyinkii laga qaadayna lagu baadhayo xarunta haayadda caafimaadka bulshada ee Stockholm.
Haweenaydan ayaa noqonaysa bukaankii ugu horeeyay ee la geeyo isbitaal, iyada oo looga shakisan yanay cudurka Ebola.
Kalkaalisadan caafimaad ayaa ka soo shaqaysay waddanka Siiralyoon (Sierra Leone ), iyada oo daryeel caafimaad siinaysay bukaanada la ildaran cudurka Ebola. Waxaana haweenaydan Sweden loo soo dhoofiyay kadib markii laga shakiyay in uu cudurka ebola ku dhacay.